Logitech Circle 2, kamera inochinjika senge iye | IPhone nhau
Logitech yakatiunzira yechipiri vhezheni yayo yekuchengetedza kamera ine dhizaini nyowani uye pamusoro pezvose zvine hunyanzvi hwakakura. SKana iwe uchida yekuchengetedza kamera iyo iwe yaunoda kushandisa mukati mekunze kana kunze kana iyo isina muganho wekuda padyo padyo, Iyi nyowani Circle 2 kubva kuLogitech iri kuenda kukufarira zvakanyanya.
Isu takakwanisa kuyedza iyo modhi nebhatiri rakabatanidzwa kwevhiki dzinoverengeka, iyo isingade tambo yemagetsi, uye isu tinokuudza iwe zvimiro zvedu muchinyorwa chino, kuwedzera kune tsanangura mashandiro ayo uye nekukuratidza hunhu hwayo pavhidhiyo saka munogona kuzvitongera.
1 Dhizaini yenzvimbo ipi neipi
2 Zvimiro uye kugadzirisa
3 Chikumbiro chakanyatsogadzirwa asi chisina HomeKit
4 Zvinhu zvinonakidza kwazvo
Dhizaini yenzvimbo ipi neipi
Iyo Circle 2 kamera ine dhizaini iwe yaunogona kunyatsoisa munzvimbo chero iri mumba mako pasina kupokana. Mukati kana kunze hauzove nedambudziko diki, mukicheni kana mumba yekutandarira, pasherefu kana musoketi mumukoto. Kuva muenzaniso pasina tambo, nebhatiri rakabatanidzwa, hauzove nedambudziko diki kana uchiisa kwaunoda kana kwaunoda. Pamberi pe LED inovhenekera paunomuka kubva kuzororo ndiyo ichamira kubva kumberi kwayo nhema, uye iyo chena idenderedzwa muviri inotaridzika kunoshamisa kwese kwaunoisa iwe.
Iyo kamera inosanganisira sitendi yekuisa pamadziro asi hazvibatsire kuiisa pamusoro pekuti kunze kwekunge iwe uchida kuitarisa kumusoro, nekuti haigare yakatsiga nekuda kwekurema kwayo. Kuti uiise panzvimbo yakati sandara unofanira kuishandisa isina hwaro, nekuda kwekuti pazasi ine nzvimbo yakati sandara uko kune tambo yevatatu, kamera inoramba yakatsiga. Kunyangwe zvakadaro, ichagara iine imwe nzvimbo yepamusoro. Icho chinhu chakapotswa: hwaro hunobvumidza kutenderera uye kutetepa sezvatinoda.
Zvimiro uye kugadzirisa
Iyo kamera inorekodha pa FullHD 1080p resolution uye inobvumira mhenyu kana kunonoka kutarisa kuonga kune Logitech's gore kuchengetedza. Iyo haina yekuchengetedza chaiyo, chimwe chinhu chiri kuramba chichiwedzera kupararira mumhando iyi yekamera. Kuvimba nemasevhisi egore kune zvakawanda zvakanaka, nekuti isu hatifanirwe kunetseka nezve chero chinhu, asi ivo vanochengetedza akawanda mashandiro ekubhadhara akabhadharwa, chimwe chinhu chatinozo tsanangura gare gare.
Kuramba kunaya, kutonhora, kupisa uye zuva zvinokutendera kuti uzviise kunze kuti uzvishandise kunze. Chiono chayo chehusiku uye kukona kwaro kwakapamhama kunotendera nzvimbo yekuona ye180º zvinoreva kuti haupotse chero chinhu chinoitika pamberi pekamera. Iyo zvakare ine inofamba sensor uye bhatiri iyo maererano naLogitech inosvika mwedzi mitatu yekuzvimirira, kunyangwe izvozvo zvichizoenderana nekugadziriswa kwawakaisa. Iyo maikorofoni yakavakirwa-mukati uye mutauri anotendera kutaurirana mumativi ese ari maviri.
Iyo kamera yekumisikidza inoitwa zvachose kubva kuapp iyo inowanikwa yeIOS uye Android. Iyo yakapusa uye inokurumidza maitiro, ayo anoda kuti kamera ibatanidzwe kune simba. Iyo kamera yakagadzirirwa kuti igare iri kure uye yakangwarira, nokudaro ichichengetedza hupenyu hwakanyanya hwebhatiri. Kana kufamba kukaonekwa mumunda wayo wekuona, inonyora kuteedzana uye iwe unoziviswa nezvayo kuburikidza neapp pa smartphone yako.
Unogona kugara uchinyorera uye woona zvakaitika mumaawa makumi maviri nemana apfuura (mahara) kana kwemazuva mazhinji kana ukasarudza kubhadhara mari yemwedzi kana yegore. Unogona kumisikidza dzimwe sarudzo senge smart notices, zvekuti inongokunyevera kana usiri pamba, kana resolution yevhidhiyo kana internet yako isinganyanyi kupa. Notifications dzinoshanda chaizvo uye kuva pamba kana kure otomatiki nekuda kwekuti iko kushandisa kunoshandisa iyo nzvimbo yeiyo smartphone yacho. Iko kunzwisisika kweiyo inofamba sensor ichave iyo inonyanya kukanganisa kushandiswa asi chichavawo icho chinoona kuti inobata chero kufamba kana chete akajeka kwazvo, chimwe chinhu chakakosha kana uchizoishandisa sekamera yekuchengetedza.
Kufunga kuti uchagara here neyemahara kana yakabhadharwa chirongwa chinhu chaicho chaicho uye kuti mumwe nemumwe anofanira kusarudza zvichienderana nezvavanoda. Iyo yemahara vhezheni inongokupa iwe kuwana kune izvo zvakanyorwa mumaawa makumi maviri nemana apfuura, nepo Premium sarudzo (€ 24 pamwedzi) Inokupa iwe mukana wekuona kusvika kumazuva makumi matatu ekurekodha, kuona kwakangwara kwevanhu, kugadzirisa nzvimbo yekuona yekufambisa uye dzimwe sarudzo dzinogona kuve dzinonakidza kune vazhinji. Tichifunga nezve mitengo yemhando ipi neipi yekuchengetedza ine vhidhiyo yekuongorora, aya € 30 pagore akatodhura.
Chikumbiro chakanyatsogadzirwa asi chisina HomeKit
Ini ndakashamisika kwazvo nekushandisa kweLogitech nekuti mushure mekuyedza akati wandei makamera eiyi dhayera haina kana kupokana iyo yandaifarira zvakanyanya. Ini handisi kunyanya kushandisa iyo iPhone yakatwasuka, uye iyi app inokumanikidza kuti uzviite, asi mukudzoka inokupa iwe chiratidzo chakanyatsorongeka uye mauri unogona kukurumidza kuona zvese zvakaitika masikati, kunyange pfupiso yezviitiko. Muvhidhiyo iri chinyorwa iwe unogona kuchiona zvizere.
Asi zvese zvakanakira kushandisa bhatiri-inofambiswa kamera inouya nemutengo, uye ndiko kuti hapana kuenderana kweKeKKit. Apple inoda makamera anoenderana neayo madhimoni sevhisi kuti igare iripo, uye nekudaro iyi Denderedzwa 2 ine bhatiri haikwane muboka iro. Nekudaro, kana isu tikatenga chero chipi zvacho chemidziyo chinoita kuti ive kamera inogara yakabatana nemagetsi, zvino zvinobva zvangoita Yekushandisa yeKiKit.
Zvinhu zvinonakidza kwazvo
Logitech ine zvimwe zvinonakidza zvishandiso zvinowanikwa zveiyi Circle 2 kamera iyo inowedzera kuita kwayo kwakawanda. Nheyo iyo inobvumira kuti iiswe mune chero hwindo uye imwe iyo inobvumidza kuti ive yakabatana yakanangana nesocket ivo vanozoita iyo kamera ine bhatiri rwoga inozove "yakajairwa" kamera, uye sezvatakambotaura kare zvinoenderana neKeKKit. Unogona kunyange kutenga rimwezve bhatiri pane webhusaiti ye Logitech.
Zvinonzwisa tsitsi kuti izvo zvatisingakwanise kuita kushandura iyo wired kamera kuita bhatiri imwe uye zvinopesana nekuti hapana mukana wekutenga wired base zvakazvimiririra uye bhatiri kesi haina kukodzera kamera isina bhatiri. Iwindo uye socket base inoshanda pamwe neayo maviri mamodheru, iine kana isina tambo.
Iyo Logitech Circle 2 ine bhatiri ndeimwe yemakamera akasiyana siyana muchikamu chayo nekuda kwekugona kwekuishandisa mukati kana kunze pamwe nemidziyo yakasiyana inoenderana iyo inobvumidza kuti iiswe mumahwindo kana zvitoro. Kuregedza HomeKit kuchinjana bhatiri iyo inokutendera iwe kuiisa iwe kwaunenge uchinyanya kuchida usinganetseke nezve plug inogona kubhadhara vashandisi vazhinji, uye chirongwa chakanyatsogadzirwa chakaita kuti ive imwe yesarudzo dzakanakisisa dzinowanikwa pamusika izvozvi. Unogona kuiwana mu Amazon kweinosvika € 218, mutengo wakakwirira kupfuura mamwe emakwikwi emamodeli asi akaderera mukuita.
Yakabatanidzwa bhatiri rekushandisa isina tambo
Zvishongedzo zvekuisa pamahwindo kana zvigadziko
1080p 180º kurekodha nehusiku chiratidzo
Pasina HomeKit kana tichiishandisa nebhatiri
Base kuti iiswe pane imwe ndege isingabvumirwe
Premium yakabhadharwa maficha
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Logitech Circle 2, kamera inochinjika senge pachayo
Ndozvakaitawo maPixel Buds Nhare, kukwikwidza kubva kuAirPods?